HARDWARE igwe nrụpụta - China HARDWARE chain Manufacturers, Suppliers
Kpoo ntuziaka ohuru nke National Association of Chain Manufacturers (NACM)
Otu ngwa ọrụ zuru oke maka ugbo, ngwa ọrụ na ngwa ụlọ.
Ihe: obere carbon nchara
Kwadoro na "RG30"
Ihe ngosi 4: 1
Nchekwa onwe nke agba, zinc plated imecha, gbanye ọkụ kpaliri
DỌ AKA NA NT:: Agabigala oke ibu ọrụ!
B FORGH FOR IHE n’elu
NACM2010 igwe igwe
Njikọ dị mkpirikpi, nke a na-ejikarị maka ọnụ ụzọ ọdụ, ngwa ọrụ ugbo na ngwa ọrụ mmepụta ihe
INCH SIZE AHDRIL AKWAKWỌ AKW STKWỌ AKW SHKWỌ AKW .KWỌ
A na-arụpụta Chain nkịtị site na nchara carbon dị ala ma dị n'ọtụtụ njikọ njikọ. Adabara a dịgasị iche iche nke ngwa gafee n'ichepụta, mmiri na ugbo ọrụ. A na-enye ọnụọgụ nkịtị nke a na-enyochaghị nke ọma maka azịza kachasị akụ na ụba maka ọtụtụ ebumnuche izugbe.
ỌHRUS AKWKWỌ ỌZỌ ỌH SHRUS NKE AUSTRALAN
A na-arụpụta eriri njikọ nke Australia Standard dị mkpụmkpụ site na ọkwa carbon dị ala dị ala ma dị na ọtụtụ njikọ njikọ. Kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ngwa gafee n'ichepụta, ọrụ ụgbọ mmiri na ọrụ ugbo, usoro a dị iche iche dị iche iche bụ ihe akaebe a nwalere ma ọ dịkarịa ala okpukpu abụọ kachasị ibu a kwadoro maka iji ya mee ihe.
DIN5685A / C (SEMI ogologo njikọ / ogologo njikọ)
DIN5685A (NEW DIN 5685-2) SEMI ogologo njikọ igwe
Maka iji ya mee ihe ebe achọrọ kọmpat na mgbakwunye mgbanwe. Ọ dị na njikọ gbagọrọ agbagọ na ntụgharị. A na-ejikarị ya eme ihe na ngwa ụlọ na ngwa ngwa ugbo.
DIN5685C (NEW DIN 5685-1) ogologo njikọ
Ojiji a na - agụnye agbụ anụ anụmanụ, ihe eji arụ ọrụ ugbo, ihe mgbochi ikpo okwu ma ọ bụ usoro nche.
Nnennen njikọ na nje ọgụ njikọ na-ma dị
INCH SIZE AHDRIL AKWILKWỌ AKWEKWỌ AKW LKWỌ D L ogologo
ỌR AKWUSKWỌ AUSTRALAN LINK LINK Long LINK
ASTM80 GRADE43 AKWAANYA NWALERE
Na-ezute nyocha ọhụụ nke nkọwa ASTM A413
Ezubere maka iji ibu ọrụ, ịdọkpụ, osisi na ngwa ndị ọzọ
Kwadoro na "RG43"
Ihe nhazi 3: 1
ASTM80 GRADE 30 AKW COKWỌ AKW CHKWỌ AKWAKWỌ
NACM2010 igwe igwe - kwụ ọtọ
NACM2010 igwe igwe - ejikọ njikọ
NACM2010 Na-agafe agbụ
Nzube zuru oke na-enye ohere njikọ iji gafere ibe ya kpamkpam, na-ewepụ ọchịchọ nke kink ma ọ bụ eriri.
General na-arụ ọrụ na ugbo na ụlọ ọrụ.
Igwe anaghị agba nchara ebu Chain N'ihi Sewag, G80 Alloy Steel Transport eweli ndoli Chain, Mmiri Short Short Chain, G80 Na-ebuli Chain ọkwa 80 Alloy Chain, Alloy Steel Eweli Chain, Eweli Chain Machinery ationgbọ njem,